Matrox ယခုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေးချန်နယ် 4Kp60 XAVC ကုဒ်နံပါတ် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Matrox အခုဆိုရင်ကမ္ဘာ့သာလျှင်လေး-Channel ကို 4Kp60 XAVC codec Card ကိုသင်္ဘောတင်
Montreal မှာ Quebec - စက်တင်ဘာလ 13, 2019 - Matrox®ဗီဒီယိုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည် Matrox M264 S4 H.264 ဟာ့ဒ်ဝဲ codec ကိုကဒ်ယခုရေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကနေဖြင့်တရားဝင် XAVC စိစစ်အတည်ပြုအစီအစဉ်ကိုပြီးစီးခဲ့ဘဲလျက် Sony က imaging ထုတ်ကုန်များ & Solutions Inc ကို ( "Sony က"), အ Matrox M264 S4 codec ကိုကဒ် XAVC အချင်းချင်းအပြန်အလှန်, XAVC Long က, ဒါမှမဟုတ် single-slot ကကဒ်ထဲကနေ AVC-Ultra encoding က / ဒီကုဒ်ဒါတစ်ခုမကြုံစဖူးလေး 4K လိုင်းများမှတက်ထောက်ခံပါတယ်။ 264:44-bit နဲ့ 2: 2: 10 4-bit မှာ Workflows onboard က de-interlacing နှင့်ချုံ့ချဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သော, အ Matrox M2 S0 ကဒ် computationally တောင်းဆိုမှုများ, High-density ကို 8 စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနည်းလမ်းများပေးပါသည်။ ထုတ်လွှင့် OEMs ယခုထိုကဲ့သို့သော 4K ချက်ချင်းပြန်ကန်စနစ်များ, ရုပ်သံလိုင်း-in-a-box ကိုစနစ်များ, ဗီဒီယိုအဖြစ် Multi-ရုပ်သံလိုင်းပလက်ဖောင်းကို enable နှင့်ဆာဗာသုံးစွဲဖို့စံ, ကို PC-based ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. မြင်ကွင်းစုံထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်စနစ်များကိုခြွင်းချက်အန်ကုက်လုပ် / ကုဒ်ဖြုတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမကယ်မလွှတ်နိုင်, High-density ကို transcoding စနစ်များ, နှင့်ပိုပြီး။
codec ကတ်များ၏ Matrox M264 မိသားစု 2019.B7 ရပ်, IBC 15 မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အထူးသ High-သိပ်သည်းဆနှင့်ယူနန်ပြည်နယ်အရည်အသွေး, H.264-based encoding က / ဒီကုဒ်ဒါ (High 10 အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ရန်အခြေခံကိုယ်ရေးဖိုင်အဆင့် 5.2 မှတက်ကိုယ်ရေး) အတွက်ဒီဇိုင်း, အ Matrox M264 S4 ကဒ် XAVC-အတည်ပြုခြင်းနှင့် AVC-ultra-compliant ရလာဒ်ကဒိပေးပါသည်။ သုည CPU အသုံးပြုမှု-နေစဉ် "နဲ့ Real-time အတွက် 264, ဒါမှမဟုတ် AVC-Ultra: 4: အဆိုပါ Matrox M4 S50 ကဒ်ဝှက်လို့ရပါတယ် / XAVC 60K အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အတန်းအစား4/ 300, XAVC 480K Long က4လေး 4Kp2 /2စီးမှတက်ကုဒ် အမြင့်ဆုံး-ဆုံး "multi-socket PC များပဲတဦးတည်းကို real-time အန်ကုက်လုပ်အောင်မြင်ရန်ရုန်းကန်။ 264:44-bit မှာ၏ 60 စီး M4 S2 ကဒ်ကိုလည်းဝှက် /2မှာ 10Kp40 လေးစီးမှတက်ကုဒ်နိုင်ပါတယ် HD4မှာ Long က GOP: 2: များ၏210-bit မှာ, ဒါမှမဟုတ် 64 စီး HD4မှာ: 2:08-bit မှာ, အသေးဆုံးခြေရာအတွက် Ultra-အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, အတူ။
အဆိုပါ Matrox M264 S4 ကဒ်ကိုလယ်-သက်သေပြချက်ကထောက်ခံနေသည် Matrox DSX SDK ကို, ဖိုင် input ကို / output ကို (I / O), software ကိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့် CPU ကိုသက်ရောက်မှု-များအတွက်လျင်မြန်သောလျှောက်လွှာနှင့် system ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအစွမ်းထက်မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့-အပါအဝင်၎င်း module တစ်ခုကျယ်ပြန့် set ကိုဝါကြွားသော။ အဆိုပါ M264 S4 codec ကိုကဒ်ကိုလည်း FFMPEG မူဘောင်သို့ H.264 transcode အရှိန်အဘို့ plug-ins များကိုပေးစွမ်းသည်။
"ဒီ Matrox M264 codec ကိုကဒ်မိသားစုရှည်လျားသည် PC-based ပလက်ဖောင်းများအတွက် de-facto, Multi-ရုပ်သံလိုင်း 4K XAVC ဖြေရှင်းချက်ခဲ့, ဒါကြောင့် OEMs စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောလေးရုပ်သံလိုင်း 4Kp60 XAVC codec ၏ရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာ ကဒ်, "အယ်လ်ဘာတို Cieri, အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး, Matrox ဗီဒီယိုကပြောပါတယ်။ "ဒီ M264 S4 ကဒ်ကို PC-based 4K Workflows လွယ်ကူသောအောင်တစ်ဦးခြွင်းချက် UHD နှင့် HDR ကိုအန်ကုက်လုပ် / ကုဒ်ဖြုတ်သိပ်သည်းဆ, အရည်အသွေး, နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးနှင့်အတူ OEM ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ "
အဆိုပါ Matrox M264 S4 codec ကိုကဒ်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဒီကဒ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, Matrox ဆက်သွယ်ပါ။
2015 Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida CES2017 ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC IBC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး MStar ဆူညံသံလျော့ချခြင်း SJGolden - SoftAtHome လှံ & Arrows စာတန်းထိုး ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2019-09-13
ယခင်: မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး Server များ၏နယူး Range များအတွက် BBright selection Matrox SMPTE ST 2110 NIC Card များကို
နောက်တစ်ခု: Matrox SMPTE ST 2019 ဖို့လုပ်နေဆဲကတိသစ္စာတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေပါတယ် IBC 2110 JT-မိုင်အော်ပရေးရှင်းစမ်းသပ်ခြင်းအစီအစဉ်ကျော်ပြီ